Soo dejisan Audacity 2.1.2 – Vessoft
Soo dejisan Audacity
Dhiiran – fudud ah si ay u isticmaalaan software si ay u qoraan iyo edit faylasha audio. software The taageertaa qaabab audio caan ah, MP3, FLAC, regelingen, Ogg iyo AIFF. Muuqaaladan ugu weyn ee dhiiran waxaa ka mid ah abuurka oo iyo dhajinta of files audio, ay ka saareen buuqa, la isku qasin of tracks, isagoo intaa ku daray of saamaynta dhawaaqa, iwm software The awood si ay u qoraan dhawaaqa ka makarafoonka, talooyin line ama ilo kale oo digitize diiwaan-analog ka cajalado ama diiwaanka phonograph. Dhiiran waa inay awoodaan inay kordhiso shaqeynayaan by xira daro kala duwan.
Goosashada iyo dhajinta of files audio
Soo saarida ee cilladaha kala duwan qaylada record
Duubista codka ka ilaha kala duwan
Qabsashada of audio Streaming ka internet-ka
Comments on Audacity:
Audacity Software la xiriira:
Українська, Français, Español, Deutsch... GoldWave 6.24
العربية, English, Français, Español... MuseScore 2.0.3
العربية, English, Українська, Français... Reaper 5.27